Mahazo Sehatra Ao Amin’ny Media Sosialy Afgàna Ny Teoriàn’ny Teti-dratsy · Global Voices teny Malagasy
Mahazo Sehatra Ao Amin'ny Media Sosialy Afgàna Ny Teoriàn'ny Teti-dratsy
MpanoratraRustam Ali Seerat
Voadika ny 15 Jona 2016 9:24 GMT
Sariitatra politika mampiseho ilay Afgàna Emir Sher Ali miaraka amin'ireo “namany” Orsa Rosiana sy Liona Britanika (1878) [Wikipedia]
Taorian'ny taompolon'ny kolikoly sy ny taonjato maron'ny fanodinkodinana teo am-pelantanan'ireo fahefana vahiny, misy dikany raha miangatra amin'ny teorian'ny teti-dratsy iray na roa ireo mpiseran'ny haino aman-jery sosialy Afghana.
Raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ao amin'ny firenena, izay mateti-pitranga, matetika ireo firenena matanjaka tamin'ny fanjanahan-tany sy ny vanim-potoana ny fanjanahan-tany amin'ny endriny vaovao – Angletera sy Etazonia — na ireo mpifanolo-bodirindrina manelingelina Iran sy Pakistan no meloka voalohany mipoitra ao amin'ny adihevitra Facebook.
Saingy raha tsy misy afaka milaza ho nanao zavatra tsara kokoa noho ny ratsy tamin'i Afghanistana na tsia ireo firenena ireo, dia aizy ireo hatrany tokoa ve ny tsiny amin'ny zava-drehetra?
Ny Hasomparan'ny Tandrefana
Efa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ny fitsabahan'ny ny Fanjakana Britanika amin'ny raharaha Afghàna saingy mbola mitàna ny toerany ao amin'ny sehatra ara-politikan'ny firenena izy hatramin'izao.
Ao amin'ilay antsoina hoe Lalao Lehibe tamin'ny 1800, nifamitaka i Londra sy i Moskoa satria nandray tamim-pahatahorana ny Rosiana ny fanjakana Britanika.
Tsy dia zava-dehibe ao anatiny sy ivelany amin'ny Britanika i Afganistana raha tsy hoe fitaovana hiarovana an'i India – firavaka eo amin'ny fanjakana Britanika – manoloana an'i Rosia mihamahazo laka .
Na dia amin'izao fotoana izao aza, vokatry ny fifanarahana eo amin'ireo firenena roa matanjaka ny sisintanin'i Afghanistan ankehitriny, izay manome sehatra goavana ny fifandraisan'ny samy foko ao amin'ny firenena.
Ankehitriny anefa, nosoloin'ny Amerikana kokoa ho toy fandri-baratra (fiarovana) manoloana ny lonilonim-bahoaka ny Britanika.
Avy amin'ny fanohanan'i Washington ny Mujaheedin izay nanatontosa ady amin'ny firotsahan'ny miaramila Sovietika an-tsehatra tao amin'ny firenena nandritra ny taona 1980 no niavian'y fitsabahan'i Etazonia ao Afghanistana.
Hita ao amin'ny toeran'ny fikomiana Taliban sy ny governemanta sivily ao Kabul ankehitriny ireo mpandray anjara tamin'izany tolona izany, saingy ny fanafihan'i Washington manokana ny firenena taorian'ny 9/11 no nahatonga azy ho lasibatra voalohan'ny ahiahim-bahoaka miely patrana.
Amerika no renin'ny Daesh [ISIS] sy reniben'ny Taliban.
Manohana ny Daesh amin'ny fanomezana dolara izy
Manohana ny Taliban amin'ny fanomezana Ropia Pakistaney izy.
Nalefan'i Mohammad Zahin Nadeem tamin'ny Alakamisy 16 Jolay 2015
Nitarika ny olona maro hihevitra ny fikirizan'i Taliban na dia eo anatrehan'ny fikambanan'ny miaramila ISAF tarihin'i Washington aza fa tsy inona akory ity vondrona ity fa saribakolin'ny Tandrefana ilaina hanamarinana ny fisian'ireo tafika miaramila vahiny maharitra ao Afghanistana.
Toy izany koa ankehitriny ny amin'ny ISIS, izay efa nanaovan'ireo vondrona mpisintaka Talibana maromaro fankatoavana.
Fitsabahan'ny Iraniana sy ny Pakistaney
Saika ny vondrom-piarahamonina Afgàna rehetra no manana fifandraisana ara-kolontsaina sy ara-poko amin'ny firenena manodidina, izay mahatonga ny loharano goavana amin'ny tetidratsy isaky ny misy vondrona mihetsiketsika.
Ny fifandraisana ara-pivavahana sy ara-kolontsain'i Hazaras amin'i Iran dia nivadika ho fahalemena ho an'izany fiarahamonina izany.
Nasehon'ireo mpiserasera media sosialy marobe avy amin'ny vondrona hafa ho tetidratsin'ny Iraniana hanakorontanana ny firenena ohatra ny fihetsiketsehana vao haingana manohitra ny fikasan'ny governemanta hamily lalana ny zotran'ny herinaratra amin'ny fomba tsy hanomezana izany (herinaratra) ho an'ireo faritra onenan'ny foko Hazaras.
Nampalemy ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina hanehoany fitarainana ara-dalàna sy hitaky ny zony izany.
Fasista, Iraniana mpanamboatra zavatra madinidinika sy tsy mahay mankasitraka ny Hazara rehetra, ankoatra an'i Ramazan Bashardoost [solombavambahoaka Hazara fantatra tamin'ny tsy fiandaniany tamin'ny disadisa teo amin'ny samy foko]. Mety ho zazasary izy, fa raha tsy izany, zanaka lahy tsy mivadika amin'i Khomeini ny Hazaras rehetra.
Nalefan'i Pashtana Afghan tamin'ny Alahady 15 May 2016
Tajiks – vondro-mponina faharoa indrindra ao amin'ny firenena aorian'ny Pashtuns – no matetika afangaro amin'i Iran sy ny Tajikistan Sovietika taloha noho ny rohy amin'ny fitenin'izy ireo sy kolontsain'izy ireo .
Mandritra izany, mpikambana maro ao amin'ny vondrona ara-poko samihafa no mahita ny marik'i Pakistan ao amin'ny Taliban sy ny hetsika fikomiana hafa izay ny Pashtun no mandrafitra ny ankamaroany.
Manilika any ivelany ny loharano
Ny tahan'ny ahiahy sy ny firaisana tsikombakomba ao amin'ny Facebook sy ivelan'izany dia sakana ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialin'ny firenena.
Voalohany indrindra, laviny ireo Afghanan'ny sampan-draharaha ilaina amin'ny fanovana ny lalan'ny firenena ary mamela ny mpanao kolikoly sy ny tsy fahombiazan'ny governemanta hitranga.
Amin'ny ankapobeny, amin'ny fitrandrahana ireo tetidratsy ireo, afaka manilika ny tsy fahombiazan'izy ireo any ivelany ny manampahefam-panjakana, ka miala amin'ny fanarahamaso ny tsi-fahaizan'izy ireo.
Raha ny marina, mety ho lasa lavitra mihitsy aza ny governemanta, manao izay hampisy ireo tetidratsy ireo ao amin'ny media sosialy amin'ny alalan'ny fanohanana ara-bola manokana an'ireo mpiserasera sy pejy.
(Gazety iray ao Kabul, 8 ora maraina, nanoratra fa mandoa vola ho an'ireo sampam-pahalalaham-baovao manokana sy mpiserasera haino aman-jery sosialy ny governemanta amin'ny drafitra antsoina hoe operative finance.)
Saingy ankoatra izany, ny fifantohana amin'ny fandrahonana avy any ivelany no mitarika mankany amin'ny fahatakarana ivelambelany ny olan'ny firenena, ary izany no mahatonga tsy fahombiazana amin'ny tsy fahitana vahaolana sahaza.
Ohatra miharihary indrindra amin'ity vaovao malaza ity ny fanomezan-tsiny ny Pakistaney noho ny faha-ela velon'ny Taliban, mandrisika ny Afghana tsy hiraharaha ny fototra sy fiaviana anatin'ny fikomiana sy ny extremisma.
Anisan'ireo andian-dahatsoratra momba ny media sosialy Afghana ity lahatsoratra ity. Jereo ihany koa ny Manampy Amin'ny Fanaovana Herisetra ao Afghanistan ve ny Media sosialy sy ny Ao Afghanistan, Mampitombo ny Kabarim-pankahalana ny media sosialy. [mg]
5 ora izayAzerbaijan